Nzira Yokuchengetedza Spot Colors mu Photoshop
Adobe Photoshop inowanzoshandiswa muRGB iyo mhando yemirayiridzo yekrini kuratidzwa kana CMYK mararamiro emhando yekudhinda, asi inogona kubata mavara mavara zvakare. Mavara mavara ndiyo inks inonzi premixed inoshandiswa mukudhinda. Dzinogona kuitika dzoga kana kuwedzera pane chimiro che CMYK. Muvara wega wega unofanirwa kuva nemapuranga ayo pamichina yekudhinda, iyo inoshandiswa kushandisa premixed ink.
Mavara emuvara inks anowanzoshandiswa mumigositi, apo ruvara runofanira kunge rwakangofanana pasinei nokuti chivara chinowanikwa kupi. Mavara aya anozivikanwa neimwe yemavara akafanana maitiro. MuUnited States, Pantone Matching System ndiyo inowanikwa yakafanana nemirairo, uye Photoshop inotsigira iyo. Nemhaka yokuti varnishes inodawo mahwendefa avo papepa rekudhinda, iyo inobatwa semirasi yemavara mu Photoshop mafaira.
Kana uri kuronga mufananidzo unofanirwa kudhinda neye kana kuti mamwe mavara eminera, iwe unogona kuisa nzvimbo dzinoona mu Photoshop kuchengeta mavara. Iyo faira inofanira kuchengetedzwa muDDCS 2.0 format kana mu PDF mapurogiramu isati yatumirwa kuti igadzire ruvara rwemavara. Mufananidzo wacho unogona kuiswa muurongwa hwekushandura peji uye ruzivo rwemavara ruvara rwakakwana.
Nzira Yokugadzira Nayo Spot Channel mune Photoshop
NeWooglehop yako faira yakasununguka, tanga nzvimbo itsva yero.
Kushandisa Window pane bhari yemenyu uye sarudza Chiteshi kubva kumadonho ekuderera kuti uzarure Chiteshi pane.
Shandisa Chisarudzo chekushandisa kusarudza nzvimbo yemuvara wemavara kana mutoro kusarudzwa.
Sarudza Mutsva Wemavara Patsva kubva pane Mapaneji menyu yemenyu, kana Ctrl + dika muWindows kana Command + chokuita mu macOS muNew Channel Channel pane Chiteshi chepanamato. Nzvimbo yakasarudzwa inozadzwa nemuvara wakatarwa wepavara uye iyo New Spot Channel dialog inovhura.
Dzvanya muBhokisi raMuvara muNew Spot Channel dialog, iyo inotanga iyo Color Picker panel.
MuChite Picker , sarudza paMabhuku Libhuku kuti usarudze ruvara rwemuvara. MuAmerica, makambani akawanda ekudhinda anoshandisa imwe yePatone Color modes. Sarudza Pantone Solid Coated kana Pantone Solid Uncoated kubva mumenyu yakaderera, kunze kwekuti iwe unogamuchira zvakasiyana-siyana kubva kune yako yezvinoshandisa printer.
Dzvanya pane imwe yePatone Color Swatche s kuti uisarudze semuvara wepavara . Zita rakapinda muNew Spot Channel dialog.
Shandura Simba rekusimudzira kusvika kuhutengo pakati pe zero ne100 muzana. Izvi zvinogadzirisa simulates pa-skrini mashizha emukati wechiratidzo chevara. Iyo inosanganisa chete pa-pepa rekuona zvinyorwa zvinyorwa uye zvinyorwa zvinyorwa. Icho hachibatsiri kupatsanurwa kwemavara. Dzvitsai Muvara Picker uye New Spot Channel dialog uye chengeta faira.
MuChannel panel, uchaona chiteshi chitsva chakanyorwa nezita remuvara wevara rawakasarudza.
Nzira Yokugadzira Spot Color Channel
Kuti ugadzire nzvimbo yepavara yemuvara mu Photoshop, unotanga kusarudza chiteshi chemavara muPaneti yePaneti.
Shandisa Brush kana imwe shanduro yekushandisa kuti uwedzere pane mifananidzo yemuvara. Dhinda rine dema kuwedzera mamwe mavara emucheka pa100 muzana opacity kana kupendeza ne grey kuti uwedzere ruvara rwemavara nechinguva chiduku. Icho chinyorwa chinoratidza ruvara rwemavara.
Bvisa chero chinhu pamusana wepakati mutsara nechombo cheEraser .
Shandisa Rudzi rwekushandisa kuti uwedzere mavara muvaravara wemainki inki.
Kuchinja Gwara reSpot Color
MuChannels panel, kaviri-kanda padhiini yecheji thumbnail.
Dzvanya mubhokisi rebhokisi uye sarudza muvara mutsva.
Pinda kukosha kwehutano pakati pe 0% uye 100 muzana kuti uenzanise nenzira iyo maruva echinyorwa achanyora. Izvi zvisingagadziri kupatsanurwa kwemavara.
Zano: Bvisa matanho e CMYK, kana aripo, nekukanda paIyes icon pedyo ne CMYK thumbnail muChannel panel. Izvi zvinoita kuti zvive nyore kuona chiri chaipo pamusana wepavara.
Kuchengetedza Mifananidzo Nekavara Wemavara
Chengetedza mufananidzo wakazadzika sewe PDF kana DCS 2.0. faira kuti uchengetedze ruvara rwemavara. Paunotumira PDF kana DCS faira mukati mekushandiswa kwemaji peji, ruvara rwemavara runotengeswa.
Cherechedza: Zvichienderana nezvinofanira kuonekwa muvaravara, iwe unogona kusarudza kuisa purogiramu yekugadzira peji. Semuenzaniso, kana chete musoro wepamusoro unofanirwa kudhindwa muvaravara ruvara, unogona kugadzirirwa purogiramu yekugadzirisa zvakananga. Hapana chikonzero chekuita basa mu Photoshop. Zvisinei, kana iwe uchida kuwedzera kambani yekambani mumuvara wepakati kumakumbo evanhu mufananidzo, Photoshop ndiyo nzira yekuenda nayo.
Nzira Yokuenda Nayo Sei Mumiririri Wechikwata
Purogiramu Yenjiniya Ipamusoro muSouth America
Nzira Yokukurira nayo Borax Crystal Snowflake
Nzira Yokutanga Nayo Kugadzira Mitambo yeMapuratifomu emafoni
Kukosha kweMamiriyoni Man March
Simba reChipiri: African American News Mabhuku muJim Crow Era
Iwe Unozviona Iwe Uri Kuitei Kwemakore 10 Kubvira Iyezvino?
Nzira Yokuita Sulfuric Acid Pamba
Zvose NezveWhirlpool Galaxy
Mikana yekuenda kuJail muMonopoly
Kusiyana pakati pe PHP Cookies uye Sessions
Seeding: Chinhu Chekukwikwidza Kwenyanzvi
Scientific Method Tsanangudzo
Icho Ichi Chine Frozen "Alaska Tree Frog" Here?
Kusarudzika kwehutano mune zvehutano kwakakanganisa zviduku mumakore
Nzira Yokudzidzisa Sei Mazwi
Chirungu Chichitarisira MuHondo Yenyika II: Nzira Yokukunda muPacific
Kufamba neKaturike 'Svondo Inotarisirwa Kuenda kuMisa
Ndezvipi Zeros zveChiadratic Function?
A Complete List of Family-Friendly Comedians
Zvinotarisirwa Kuwana Vakaroorana muChechi yeKaturike
Nhamba dzeMutauro weSpain
Kuburikidza nemakumbo: French Nasal Vowels
Kukurukurirana neVaIndia Vakadzi veSarojini Sahoo
Heino iyo Mhemberero yekunyora kuna Santa kuti uve Wechokwadi Unowana Mhinduro
Venus, Mwarikadzi weRudo uye Runako
Nzira Yokuita Chinhu Chaicho Chaicho Chechi
Nzira Yokugadzirisa Sei MyColor uye Ambient Mustang Indaneti Chiedza Zvirongwa
Mwedzi Wakakwana Mhemberero
Nhungamiro Pfupi yeChiratidzo